महन्थ र बाबुरामको विवाद छैन, जसपाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सक्छ : राजकिशोर यादव | Ratopati
'घटनाक्रम अगाडि बढ्यो भने हामी संसदीय दलको नेता छान्छौँ'
सरकार निर्माणको ‘किङमेकर’ भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र विवाद नरहेको बताएका छन् ।​ जसपाबाट प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई दुईजनाको नाम चर्चामा आए पनि पार्टीले सहमतिका आधारमा एकैजनाको नाम दिन सक्ने यादवले दाबी गरे । यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘जसपाले एउटा नाममा सहमति गर्छ । विवाद हुँदैन, हामीले पायौँ भने सहमतिमै व्यक्ति अगाडि सार्छौं।’
जसपा नेता यादवसँग पछिल्लो सत्ता समीकरणमाथि केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
के जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ?
दाबी भन्दा पनि पहिलो कुरा त विभिन्न विकल्पहरुमध्ये यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । सरकारको जहाँसम्म सवाल छ, अहिलेको वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार हो । राजनीतिक रुपले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीले विरोध गरे पनि कानुनी र संवैधानिक रुपले सरकारसँगै छ । र, यो सरकार बहुमतको सरकार हो ।
अर्को कुरा, नेपाली काँग्रेसले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेको छ । फेरि नेपाली काँग्रेसले हामीसँग त्यो अनुरुपको कुनै संवाद गरेको छैन । उहाँहरुले आफै निर्णय गर्नुभयो तर त्यो निर्णय अनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन ।
त्यसैले जसपाले प्रथमतः हामीसँग जुन दायित्वहरु छन्, आन्दोलनले उठान गरेका मुद्दाहरु छन्, यसमा एउटा साझा दृष्टिकोण बन्यो भने हामी सोच्न सक्छौँ । संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्&zwj;यो । आन्दोलनका जुन घटनाहरु भएका छन्, त्यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा एउटा साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्&zwj;यो ।
यो संसदीय राजनीतिमा त गणितले काम गर्छ । त्यसैले विभिन्न विकल्पहरुमध्ये अहिले जसपाको नेतृत्व पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । यही आधारमा हामीले यो विकल्प दिएको हो । यसको मतलब हामी यो भएन भने राजनीतिक प्रक्रियामै गतिरोध पुर्‍याउने हाम्रो सोचाइ होइन । विभिन्न विकल्पहरुमध्ये अब गठबन्धनको सरकार बन्ने हो भने यो गठबन्धनको नेतृत्व जसपालाई दिँदा मलाई लाग्छ एउटा सहकार्यको वातावरण बन्छ र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको पनि सन्देश जान्छ ।
तपाईंले ‘गठबन्धनको सरकार’ भन्नुभयो, गठबन्धन त दुईवटा बन्न सक्छन् । एमाले–जसपा गठबन्धन भन्न खोज्नुभएको हो कि काँग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धन ? कुन गठबन्धनको सम्भावना बढी छ ?
पहिले माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्थिति क्लियर गरिसकेपछि मात्रै एमालेले गठबन्धनका लागि प्रयास गर्ने हो या सहयोग माग्ने हो । माओवादीले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म उसले (एमालेले) हामीसँग सहयोग मागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुरहरुसँग छलफल त गरिराख्नुभएको छ नि हैन र ?
त्यो छलफल सरकारका लागि भएको होइन । हाम्रा मागहरुका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल भएको हो । राज्यले गर्नुपर्ने जुन कामहरु छन् ती काम त अब सरकार जसको छ, उसँग संवाद त गर्नै पर्‍यो । त्यसैले तिनै मुद्दाहरुमा अहिले कुराकानी अगाडि बढेको हो ।
त्यसो भए यहाँले ‘गठबन्धनको सरकार’ भनेर काँग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनकै कुरो गर्नुभएको हो ?
हैन, गठबन्धन त दुईवटै गठबन्धन हुन सक्छन् ।
केपी ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा छ नि ? खासमा, भित्री कुरो के हो ?
अहिलेसम्म औपचारिक हिसाबले जानकारी आएको छैन । मिडियाले आफ्नो खपतका लागि मात्रै चर्चा गरेको हो ।
तपाईंहरु जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीका लागि महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई दुईजनाको नाम चर्चा आउनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीको नाममा पार्टीभित्रै किन सहमति बन्न नसकेको ?
हैन, जसपाले एउटा नाममा सहमति गर्छ । हैन, यो त बाहिर चर्चामा आएको मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पनि दाबी छ है भनिराख्दाखेरि दाबेदार को हो भन्ने त स्पष्ट हुनुपर्ला नि ?
हामीले फलानालाई नै बनाऔँ भनेर हुने गणित हामीसँग छैन । गणित भइदिएको भए हामी फलानालाई बनाऔँ भन्ने थियौँ । यो त के हो भने अरु विकल्पहरु नहुँदा मात्रै हाम्रोमा आउने हो । यसका लागि त गठबन्धनका सदस्यहरुले ल फलानालाई तपाईंहरुले अगाडि सार्नुभयो भने हाम्रा लागि प्रधानमन्त्री स्वीकार्य हुन्छ भनेको अवस्थामा हामी सहमतिको नाम अघि सार्छौं। जसपामा विवाद हुँदैन, हामीले पायौँ भने सहमतिमै व्यक्ति अगाडि सार्छौं ।
तपाईंंहरुले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता पनि छान्न सक्नुभएको छैन नि ?
अब घटनाक्रम अगाडि बढ्यो भने हामी संसदीय दलको नेता छान्छौँ ।
जसपाभित्र आन्तरिक विवाद छ भन्ने खुबै चर्चा छ नि ? विवादको कारण के हो ?
यो त मिडियाहरूले आफ्नो खपतका लागि क्रिएट गरेका हुन् । जसपाभित्र जबर्जस्ती विवाद बनाइदिएका हुन् ।
मिडियालाई दोष लगाउनुहुन्छ तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरिरहनुभएको छ, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ त्यस्ता भेटवार्तामा सहभागी नभएको त देखिएकै छ नि । प्रष्ट दुई लाइन त देखिएकै छ....
यस्तो छ, पार्टी भनेको निर्णयले चल्ने हो । जसपाको जुन औपचारिक निर्णय छ, त्योभन्दा दायाँ–बायाँ कुनै नेताले गर्नुहुन्न, गर्नुभएको छैन ।
नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ, यसमा जसपाको प्रतिक्रिया के छ ?
जसपाले अहिले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।
तर जसपाले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी चाहिँ गरेको हो ?
निश्चितरुपमा,​ जसपाले देशलाई किमार्थ अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दैन । तर जसपा अहिले संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना मागहरुमा केन्द्रित छ ।